दिनेश गौतम काठमाडाैं, २६ जेठ
एक दशकअघि नै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा फेरि विवाद सुरु भएको छ । सरकारले मैदानभित्र पर्ने जग्गा धनीलाई सट्टा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार लालपूर्जा पाए पनि जग्गा नपाएको भन्दै पीडितले मैदान निर्माणमा अवरोध गर्न थालेका छन् । सट्टा जग्गा पाएको ठाउँमा सुकुमबासी बस्ती रहेकाले फेरि विवाद भएको हो ।
‘दिनको भोक न रातको निन्द्रा भएको छ,’ पीडित फूलमाया तामाङले भनिन्, ‘सट्टा जग्गाको पुर्जा त पायौं, जमिन पाएका छैनौं ।’ सट्टा जग्गा भएको ठाउँमा अहिले सुकुमबासी बस्ती रहको उनले बताइन् । तामाङले भनिन्, ‘हामीले उहाँहरुलाई निकाल्न मिल्दैन, सम्बन्धित निकायले बस्ती हटाउन चासो दिएको छैन ।’
मैदानको बीच भागमा फूलमाया तामाङ र कृष्णमाया तिमल्सिनाको दुई वटा टहाराको घर छ । सट्टा पुर्जा पाएको ६ महिना बित्यो, खाली नहुँदा सर्न पाएका छैनौं,’ पीडित कृष्णमायाले भनिन्, ‘सट्टा जग्गा खाली भए तुरुन्तै सर्छौं, मैदानको जग्गा ओगटेर बस्दैनौं ।’ गत वर्ष मैदानमा परेको ५२ आना जग्गाका धनीलाई सरकारले सट्टा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।
क्रिकेट मैदान निर्माण सुरु हुनु अगावै सुकुम्बासीहरु सोही मैदानमा टहारा बनाएर बसेका थिए । सरकारले मैदान बनाउन अधिग्रहण गरेपछि सुकुम्बासीकाप्रति परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ दिएर मैदानको छेउमा स्थानान्तरण गरेको थियो । उनीहरु अहिलो सो स्थानबाट सर्न मानेका छैनन् । उनीहरुले क्षतिपूर्तिका साथै आफूहरुलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्था मिलाइदिन माग गर्दै आएका छन् । आफूहरुको व्यवस्थापन नभएसम्म सो स्थान नछोड्ने सुकुमबासीहरुको भनाइ छ । राज्यले हामीलाई सौताको व्यवहार गर्यो, पीडित सुकुमबासी प्रश्न गर्छन्, ‘हामी चाहिँ नेपाली नागरिक हैन ?’ हुनेहरुलाई स्थापित गरेर हामीलाई विस्थापित गर्न मिल्छ ?
विवाद समाधानमा किन ढिलाइ ?
विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको पीडितको गुनासो छ । अन्तर्राष्ट्रिय मैदान बन्नु गर्वको विषय भए पनि विवाद समाधन गर्न सरकारी निकायले ढिलाइ गरेको पीडितहरु बताउँछन् । उता, राष्ट्रिय खेलकुल परिषद्का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले जग्गाको विषयमा त्यति ठूलो समस्या नरहेका दाबी गरे । ‘लामो कसरतपछि सरकारले पीडितलाई सट्टा जग्गा दिएको छ,’ उनले भने, ‘सुकुमबासी हटाउने जिम्मा अब स्थानीय सरकारको हो ।’
काम सुस्त गतिमा
उक्त मैदान एक दशकअघि नै निर्माण सम्पन्न हुनु पर्ने हो । झण्डै २० हजार दर्शक अटाउने गरी निर्माण भइरहेको क्रिकेट रगंशाला बनाउने काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ । मुआब्जा विवाद, भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दीका कारण ढिलाइ हुँदा निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकिएको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । अहिले रंगशाला वरिपरी पर्खाल लगाउने काम भइरहेको छ ।
आगामी दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको राखेपका सदस्य सचिव विष्टले बताए । सरकारले मुलपानी क्रिकेट मैदानका लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि १० करोड बजेट विनियोजना गरेको छ । सुस्त गतिमा काम भइरहेकाले तोकिएको मितिमा काम सम्पन्न हुनेमा धेरैले आशंका गरेका छन् । नेपालले क्रिकेट खेलमा एकपछि अर्को उपाधि हात पारिरहेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदान निर्माणमा ढिलाई हुँदा क्रिकेटप्रेमी निराश भएका छन् ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, जेठ २६, २०७६, ०६:१३:००
वा ! हाइकिङ
४२ सन्तानकी कुमारी आमा !